Yakatumirwa ne Tranquillus | Nov 22, 2020 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Kuti ikurudzire vashandi, makambani mazhinji anopa marudzi akasiyana emabhonasi mukuwedzera kune chaiwo mabhadharo emwedzi uye semubairo webasa rakanaka, kupinda, vakuru kana mamwe mabasa anorumbidzwa. Sezvo mwaka wezororo unosvika, waunoshandira aimbokubhadhara bhonasi imwe chete. Pakarepo, hapana. Shandisa yemhando tsamba pakati yeavo ini yandinodaidza kuti ndidzokere kune zvakajairwa.
Mhando dzakasiyana dzemabhonasi
Mundima yehunyanzvi, kune mhando dzakasiyana dzemabhonasi. Iko kune echinyakare maprimamu, ayo akatopihwa kare muchibvumirano chebasa. Zvino chibvumirano chakabatana kana zvibvumirano zvekubatana. Zvakare nemabhonasi ekuzvidira ayo, kune rimwe divi, anopihwa mahara nemushandirwi. Chero zvingave zviripo zvemaprimiyamu, zvinoenderana neseti yemitemo yakatarwa nemirau.
Zvinowanzoitika kana zvekumanikidza maprimiyamu
Maprimiyamu evashandisi anowanzo sunganidzwa nezviitiko zvekambani. Iko mhando yebhonasi yekumanikidza kune vashandi. Yakabatanidzwa nehukuru hwavo, asiwo kune chimiro chezviitiko zvavo uyezve kune yavo nhanho yekuita. Mushandirwi ane basa rekubhadhara aya mabhonasi, angave ega kana pamwe chete. Uye izvi zvinoenderana nemamiriro ezvinhu akatsanangurwa chaizvo muchibvumirano chebasa, chibvumirano chekubatana kana zvimwe zvinyorwa zvepamutemo. Kunyangwe pakutanga pakutanga rudzi urwu rwebhonasi rwakasarudzwa zvichitevera kuzvipira kune imwe nyika nemushandirwi.
Kupera kwegore mabhonasi
Mabhonasi anoenderana nezvinangwa kana mhedzisiro
Balance sheet mabhonasi
Kubva pamwedzi wechi13
Aya maprimiyamu anotsanangurwa zvinoenderana nenzira isinga tsanangurike yekuverenga uye yakagadzirirwa mumagwaro epamutemo. Ivo vanoumba yekuwedzera muripo wakapihwa kune vese vashandi. Sechikamu chezvikamu zvemubhadharo ivo pachavo, aya mabhonasi anozoiswa pasi pemipiro yemagariro uye mutero wemari.
VERENGA Mumwe nemumwe anogamuchira ane fomula yakakodzera!
Izvo zvakare zvinoita kuti ugamuchire chaiwo maprimiyamu (muchato, kuberekwa, PACS), mari yekutakura kana maprimiyamu ezvokudya.
Iwo anonzi "ekuzvidira" mabhonasi, kamwe-kure kana akasarudzika, mabhonasi asiri ekumanikidza. Mushandirwi anovabhadhara vakasununguka uye pahungwaru hwavo. Aya marudzi emabhonasi anogona kuva:
Bhonasi yekupera-kwegore, mhando yemubhadharo iyo nzira yekuverenga inoiswa nemushandirwi muchibvumirano chebasa kana chibvumirano chakabatana.
Bhonasi yakasarudzika kana bhonasi yechiitiko chimwe chete, imwe mari yekuwedzera kumubhadharo wakabhadharwa newaunoshandira kana mushandi akazadzisa zvese zvinodiwa;
Iyo isiri-tsaona premium;
Bhonasi yakapihwa "zvinoenderana nebasa raitwa"
Kune rimwe divi, aya anonzi "ekuzvidira" mabhonasi anomanikidzwa uye anova chikamu chemubhadharo, kana mashandisiro awo ari:
Kazhinji, iyo mari inobhadharwa kune vese vashandi kana kugara kune iro dhipatimendi,
Nguva dzose, yakabhadharwa pamusoro pemakore akati wandei,
wenguva dzose uye yakatarwa kubhadhara kweakaenzana huwandu.
Ndingaite sei kukumbira kubhadharwa kweprimiyamu?
Bhonasi chikamu chemubhadharo. Nekuda kwekutarisa kana kukanganisa pane chikamu chemaneja, kuramba kubva kumushandirwi, kusabhadharwa kwebhenefiti kunoonekwa sekukanganisa kwakakomba kune yako kambani.
Une makore matatu ekuita chichemo. Muchiitiko chekumiswa kwechibvumirano chako, aimbove mushandi anogona kukumbira maprimiyamu asina kubhadharwa kwemakore matatu apfuura asati abva mukambani zvinoenderana nechinyorwa L.3-3245 cheLabour Code.
Muchiitiko chekuti waunoshandira asina kukubhadhara iwe imwe kana yakawanda mari yepremiamu. Kumbira ivo nemuromo kutanga. Zvino mukusavapo kwemhedzisiro, tumira tsamba yakanyoreswa inekubvuma kwekugamuchira. Kana waunoshandira akasakupa mari yaakakwereta. Iwe une mukana wekuendesa nyaya yacho kuPrud'hommes Council.
VERENGA Ziva makodhi ekushandisa mumamiriro ehunyanzvi
Maitiro akafanana anofanira kutorwa pakubhadharirwa kweprimiyamu "kana yakazvipira" isina kubhadharwa newaunoshandira. Mushandi saka anogona kutanga chiito chake nechikumbiro chemuromo, nekutumira tsamba yakanyoreswa inekubvuma kwekugamuchira. Kana zvikaitika kuramba kwevashandirwi, zvinokwanisika kutanga chiito neLabour Council. Kune rimwe divi, Dare reCassation rinotsanangura, Social Chamber Kubvumbi 1, 1981, n ° 79-41424, mushandi anofanira tsananguro iko kujairwa kweprimiyamu pamberi penzvimbo iyi inokwanisa.
Seuchapupu, anofanira kuzivisa:
Kujairika kwekubhadharwa kweprimiyamu kwemakore akati wandei,
Kubhadharwa kwebhonasi kune vese vashandi kana boka revashandi, semuenzaniso kubva kubazi rimwe chete
Kubhadharwa kweiyo yakafanana gore rega rega.
Heano mamwe tsamba dzekuenzanisira kutora bhonasi yekushandisa, iyo iwe yaunokwanisa kuchinjisa kune mamwe marudzi erubatsiro.
Wokutanga tsamba muenzaniso
Musoro: Chikumbiro chekubhadharwa kwebhonasi yekupera-kwegore
Zvinoenderana nekontrakiti yangu yebasa, kambani inowanzondibhadharira bhonasi yekupera kwegore Zvita wese. Ini ndinokuzivisai kuti haina kutaurwa mupepa rangu rekubhadhara mari, kunze kwekunge ndakanganisa, gore rino.
Sezvo ndashanda mukambani kwe [nhamba] makore, ino inguva yekutanga kuti ndisatambira bhonasi yangu. Mushure mekutarisa nevamwe vangu, zvinova pachena kuti vazhinji vashandi vane dambudziko rakafanana. Saka ndakasvika pakufunga, kuti isu hatisi mune yekukanganisa kuri nyore maererano neni.
Kubhadharwa kwebhonasi iyi asi kwakajairwa, kugadziriswa, uye kuitirwa vese vashandi. Rubatsiro urwu rwazova rwekumanikidza sezvakataurwa nemutemo.
Sezvo matanho anodiwa ekuputsa kushandiswa uku asati atorwa, ndinogona kufara kana iwe ukakwanisa kuronga kubhadharwa kwebhonasi yangu yekupera-kwegore.
Kumirira mhinduro yakanaka kubva kwauri nekuda kwekugadziriswa uku, ndapota gamuchira zvandinoda.
Yechipiri tsamba muenzaniso
Musoro: Chikumbiro chekubhadharwa kwebhonasi yekuita
Kubva zvandakatanga mukambani medu, se [basa] kubva [zuva], kondirakiti yangu yebasa inotaura nezvekodzero yangu yebhonasi yekuita zvinoenderana nekugona kwangu uye nekugadzira.
Kubva zvandakabatanidzwa muchikwata chako, unogara uchindibhadhara bhonasi iyi pakupera kwegore rega rega.
Iyi premium saka yawana, kuburikidza nekushandisa kwayo kazhinji uye nekudzokorora, hunhu hunodiwa.
Kunyangwe ini ndakakwanisa kuwana zvirinani mwaka uno ndichienzanisa neyekupedzisira, ndakaona mune yangu yekupedzisira payslip kuti hauna kundipa. Ndatenda nekunditsanangurira chikonzero chekusabhadharirwa mari yangu, kana zvichiruramiswa.
Zvikasadaro, ini ndinotarisira kugadzirisa nekukurumidza, uye ndokumbirawo mugamuchire, Changamire, kwaziso dzangu dzakakurumbira.
Dhawunirodha "premier-exemple.docx"	mutungamiri-muenzaniso.docx - Yakadhindwa ka4302 - 15 Kb
Dhawunirodha "wechipiri-muenzaniso.docx"	deuxieme-exemple.docx - Yakadzoswa ka4192 - 15 Kb
Semuenzaniso tsamba yekumubhadharira mubhadharo January 8th, 2022Tranquillus
pashureFrance Relaunch | Kutanga kwe "1 mudiki wechidiki, 1 mhinduro" chikuva
zvinoteveraWhistleblower: hapana mushandi anodzivirirwa mukushaikwa kwekutadza kwemhosva kune iye mushandirwi
Nzira yekunyora chidimbu chezvenyanzvi?
Muenzaniso wepositi kukumbira kusiya pasina kubhadhara.
Email template kururamisa kusavapo